Ny asa momba ny governemanta ao Dubai dia mahita asa momba ny governemanta any UAE
Fikarakarana ny governemanta ao Dubai ho an'ny Expats
Desambra 13, 2017
navoakan'ny Dubai City Company at Desambra 17, 2017
Mpitantana fitondrana ao Dubai
governemanta Asa any Dubai, Ka dia ianao mitady asa any Dubai City?. Ny fomba tsara indrindra dia ny miresaka fotsiny amin'ny ekipanay, ny orinasa dia orinasa mitombo haingana indrindra any Atsinanana. Izahay dia manampy ireo ekipa hikaroka asa vaovao any Dubai. Afaka mahita mpiasa mandray mpiasa maro ianao ao Dubai. Raha mitady asa avy any India sy Pakistan ianao. Ny orinasanay dia fomba mety hahitana a asany in Emira Arabo Mitambatra. Ny asa ao Dubai City manana zavatra tsara maro fomba hitadiavana asa any Emirà Arabo Mitambatra.
Manampy ny mpikaroka ho mpikaroka ho mpitsabo ny governemanta ao Dubai izahay. Amin'ny lafiny iray, azonao atao ny mikaroka asa amin'ny alalan'ny fitsidihana visa feno momba ny fianarana sy fampandrosoana any anaty orinasa Governemanta. Ny fomba tsara indrindra hanafainganana ny dingana dia ny fijerentsika Fampandrenesana mpanova lalao Dubai. Noho izany, afaka mahita asa any amin'ny orinasa mpampiasa governemanta any Dubai ianao.
Asa miasa ao Dubai
Ny orinasa tsara indrindra ao amin'ny UAE amin'ny fampiharana !.
Jobs in Ny orinasam-panjakana ao amin'ny Arabie Arabo Emirates.
Ny orinasan'ny governemanta tsara indrindra hiasa any Dubai!
Jobs amin'ny International Investment Company
International petroleum fampiasam-bola Orinasa (IPIC) Raha ny marina, ity orinasa ity dia napetraky ny Governemantan'i Abou Dhabi. Ankoatra izany, misy orinasa iray tena malaza any amin'ny orinasa Oil. Ny antsipiriany ihany koa dia nanazava izany Dubai mahagaga orinasa amin'ny Emiriady iray ao 1984. Amin'ny alàlan'ny mari-pahaizana IPIC mitovy dia mandoa ny famatsiam-bola mikasika ny fampiasam-bolan'ny Moyen Orient eran-tany eo amin'ny tsenan'ny indostrian'ny angovo sy angovo.
Na dia mety ho marina aza ny orinasa governemanta any UAE. Ireo orinasa hafa manana orinasa 100% amin'ny tsenan'ny orinasa IPIC. Ary amin'ny lafiny iray, ny orinasa dia manendry ny rehetra mpikambana ao Dubai ary i Abu Dhabi avy amin'ny filankevi-pitantanany izay mikasa ny hitombo ao amin'ny IPIC. Nandritra ny taonjato nifandimby, ny IPIC dia nanohana ny fandraisan'anjaran'ny Biraon'ny governemanta ao Abu Dhabi.
Na dia mety ho ilay tena orinasa aza izao dia manana MUBADALA ankehitriny. Mandritra izany fotoana izany ny orinasa, dia manana vondron'olona marobe mitady mpikaroka matihanina. Afaka mahita asa ao Mubadala izy ireo izao. Miaraka amin'ity tanjona ity, ny orinasa dia manana traikefa tsara indrindra momba ny International Investment Petroleum Investment. Ho an'ny tanjona mitombo amin'ny tsenam-bolan'ny Dubai. Mpanatanteraka sy mpiasa mifehy ny dia. Mba hametrahana fomba hafa, ny fotoana laninao amin'ny orinasa iray dia ahafahanao mitombo isa miaraka amin'ny orinasa iray. Fantaro bebe kokoa ny momba ny fanombohana ny orinasa Petroleum sy ny orinasa toy ny Mubadala.
Fikarakarana ny governemanta any Dubai - Mampakatra ny Resume mankany Mubadala.
Jobs in Abu Dhabi Investment Council
Ny zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny Filankevitry ny Investment Abu Dhabi dia orinasan-tanora sy mitombo ao Afovoany Atsinanana. Ny zavatra voalohany tokony ho tsaroana fa ny Filankevitry ny Investment Abu Dhabi dia ho iray amin'ny orinasa tsara indrindra sy ambony indrindra amin'ny 2019. Izany rehetra izany dia mitarika ny orinasam-bola fampiasam-bola tsy hoe any Abu Dhabi ihany koa ny orinasa fa manerana an'izao tontolo izao koa. Ny porofo manamafy indrindra an'izany afaka mahazo asa ianao miaraka amin'izy ireo dia amin'ny alàlan'ny ezaka mitambatra rehefa manoratra CV ianao. Amin'ny lafiny tsara ho an'ny mpizaha tany izay mitady asa. Ao amin'ny kandidà tsirairay avy dia hanampy anao hahatratra ny tanjona rehetra ny mpiasany.
Manomboka manorina ny asanao any Abou Dhabi
Raha ny marina, ny orinasa dia mampiofana sy mivoatra. Izay kandidà vaovao rehetra lasa talenta lehibe any Moyen-Orient.
Amin'ny ankapobeny, ny Filankevim-bola Iraisam-pirenenan'i Abu Dhabi dia mitantana sy manome valisoa. Ampifandraisina amin'ny fampisehoana mahomby ao amin'ny Filankevitra.
Ohatra, ny orinasa dia mino fa ny fifandraisana amin'ny asa eo amin'ny fitantanana sy ny mpiasa dia tokony sokafana foana amin'ny expats avy any India.
Ny fanamafisana ny kolotsain'ny orinasa dia fomba iray manintona tolotra toro-hevitra ao Dubai.
Ny zavatra voalohany tokony hotsarovana, ny fahaiza-manao, ny fahatokisan-tena fitantanana ary ny ambition momba ny asa. Zava-dehibe ve izany? mpitarika mpilatsaka hofidiana vaovao amin'ny asa isan'andro.
Manondro ny Abu Dhabi Investment namorona ny tontolo mahavariana ho an'ny mpitady asa. Ao an-tsaina, ity orinasa ity dia samy talanjona amin'ny fifehezana ary mpikaroka momba ny asa hafa miaraka amin'ny MBA. Sady koa anie, Indian expats sy olona Aziatika hafa. Manoro hevitra fa hiditra ho amin'ity orinasa ity ho kandida vaovao. Miaraka amin'ity fikambanana ity, dia afaka mitombo. Raha ny tokony ho izy, Jobs amin'ny Abu Dhabi Investment Council, orinasa dia mino ny mpiasa fa tsy ny fitantanana fotsiny. Na dia eo aza izany orinasa matihanina matihanina ho an'ny mpivahiny. Afaka miaraka amin'ny orinasa hafa Investments, azo atao ny tanjona momba ny asa bebe kokoa.
Karohy ao Abu Dhabi Ports Company
Raha ny zava-misy dia orinasa i Abu Dhabi Ports no orinasa tsara indrindra. Miaraka amin'ny birao vitsy any Dubai dia afaka miara-miasa amin'izy ireo ianao. Tsy milaza na inona na inona momba ny toerana fandaharan'asa fampivoarana an'habakabaka Abu Dhabi. Ao amin'ny fahazavana asa tao amin'ny orinasa Emirates dia mitsidika hatrany ho an'ny mpitsoa-ponenana vaovao kandidà. Amin'ny lafiny ratsy, be dia be ny matihanina efa za-draharaha hanatevin-daharana ny ekipany. Ka tsy mora kely ny manomboka haingana fiaraha-miasa amin'ny orinasa Abu Dhabi.
Ny mpandraharaha vaovao ao amin'io orinasa io dia raisina, ny orinasa dia tena tsara asa ho an'ny mpianatra eny amin'ny oniversite sy eny amin'ny oniversite tao Abu Dhabi, Career amin'ny seranan-tsambo dia efa nalaza nandritra ny taona maro tao afovoan'ny Abu Dhabi. Ny mpifaninana tsirairay dia tsy maintsy mahatsiaro fa ny kolontsaina seranan-tsambo satria 2010 dia iray amin'ny tsara indrindra amin'ny kilasy. Programam-pianarana ho an'ny mpianatra manohy ny fandraisana mpiasa mpikirakira tetikasa miaraka amina fifantohana amin'ireo andraikitra ara-teknika ao Abu Dhabi.
Zava-mahagaga iray izay mandray ny zom-pirenena sy ny expats ao Abu Dhabi. Ny ezaka kolontsaina orinasa Emirates dia manana toe-tsaina ekipa sy finiavana ho an'ny Moyen Orient. Ao an-tsaina ny etika miasa dia fanalahidy hahazoana asa. Ao amin'ny tontolo milina haingana nefa somary sariaka ao Afovoany Atsinanana ary indrindra ny tsenan'ny asa Abu Dhabi. Ny fanalanana ny tolotra fototra dia manao tetika mahasoa izay manome karama tsara. Mahagaga ny asa ao anaty orinasa iray dia fankasitrahana ireo mpikambana rehetra ao amin'ny ekipantsika izay hiaraka amin'izy ireo.
Mpitantana fitondrana ao Dubai. Miangavy anao hiditra amin'ny seranan-tsambo any Abu Dhabi fandaminana ho an'ny banga ankehitriny.
Ny asa any Abu Dhabi terminal (ADT)
Mba hahazoana antoka fa manana Abu Dhabi Terminals (ADT) asa mahatalanjona. Ohatra, ny orinasa Ports dia mitantana sy mitantana an'i Khalifa Port sy mpitantana HR fakana asa ho an'ny varotra fanontam-pirinty Container. Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny orinasa Abu Dhabi Ports Company dia mihazakazaka iray amin'ny fararano mandroso indrindra amin'ny teknolojia ao amin'ny Emirates ary iray amin'ireo tsara indrindra eto ambonin'ny tany.
Noho izany antony izany dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny seranan-tsambo tamin'ny volana Desambra 2012. Amin'ny ankapobeny, Abu Dhabi Port dia orinasa fiarahamiasa tsy miankina. Any aoriana any, ity Governemanta ity Ny seranan-tsambon'i Abu Dhabi dia lehiben'ny mpitantana ambony ary vitsivitsy hafa mpiara-miombon'antoka fotodrafitrasa avy amin'ny Emirà Arabo Mitambatra.
Manome fidirana amin'ny mpiasa ao aminy ny Abu Dhabi Ports Company iray amin'ireo tsenan'ny fitomboan'ny haingana ao amin'ny Moyen-Orient. Na izany na tsy izany dia misy ny kandidà miasa miaraka amin'ity orinasa ity ny fahombiazana ao UAE. Raha ny hevitr'ity orinasam-pifandraisana ity dia hidiran'ny foto-drafitrasa safidy asa an-tsokosoko misy eran-tany ianao. Ary afaka miasa ao amin'ny orinasa toy ny vehivavy mpivaro-tena.
Mpitantana fitondrana ao Dubai - Abu Dhabi Ports Company.
Jobs in Abu Dhabi miaraka amin'ny orinasa Oil Oil
Ny National Oil Company dia manolotra karazana fahafaha-manao karakarary be dia be any Abu Dhabi sy Dubai. Raha nomena ireo hevitra ireo, ity orinasa governemanta manome asa mahafa-po any amin'ny tsenan'ny Middle East. Olona maro no mitety an'izao tontolo izao. Araka ny nomarihan'ny orinasan-dalampanorenana Nasionalin'ny mpampiasa manana olona ambony sy olona. Ho an'ny ampahany betsaka, azonao atao ny manatanteraka ny tanjaka feno amin'ny fampiharana ao amin'ny tranonkalany. Amin'ny ankapobeny dia manomboka asa miaraka amin'izy ireo manampy anao hanamboatra ny ho avy ny sehatry ny angovo ao Abu Dhabi.
Amin'izao fotoana izao ny orinasa mihazakazaka miorina amin'ny a rafitra fanodinana. Indraindray dia afaka mahita toerana eo amin'ny mpanatanteraka miaraka amin'ny orinasa ianao. Mazava ho azy fa ny orinasa National Oil dia mamatsy vola ny olony. Na ho ela na ho haingana famoronana tontolo asa mahasoa ao anatin'ity orinasa ity dia fomba iray hahombiazana.
Ao amin'ny mialoha, ny olona manatevin-dry zareo ny orinasan'ny solika dia manome lanja ny heviny sy ny fandraisana anjara. Mandritra izany fotoana izany dia omena ny orinasa ny orinasa fahafahana hahatsapa ny fahafenoany feno ho an'ny mpitady karama tsirairay tao Abu Dhabi. Mandraka ankehitriny, ny orinasam-pirenena momba ny solika dia manondro ny hamaritana ny olona raharaham-barotra. Raha jerena ireo teboka ireo, Ny expats dia ny fanalahidin'ny fahombiazantsika ho an'ny orinasan-tsolika iray. Amin'ny ankapobeny dia miresaka momba ny asan'i Abu Dhabi. Mamela, mba hametraka azy amin'ny fomba hafa, maka fomba fiasa maharitra mandritra ity fikambanana matihanina any Abu Dhabi ity fampandrosoana any UAE.
Mpitantana ny Governemanta any Dubai - Fandefasana Resadresaka ho an'ny orinasam-panjakana.
Vondrona Media Araba any Emirà Arabo Mitambatra
Ny zavatra voalohany tokony hotsaroana rehefa manao fikarohana momba ny asa ianao dia ny Arab Media Group. Mba hanondroana ny antony tokony hangatahanao amin'ny asa amin'ny MBA. Satria miaraka amin'ny Media Group Company ianao dia afaka mahazo ny iray amin'ny tsara indrindra tolotra asa any amin'ny faritr'i Arabia Saodita. Amin'izany dia mahazo karama miaraka amin'ny orinasa fialamboly fanta-daza. Iza avy izao no nalaina ho amin'ny fampielezam-peo radio tamin'ny United Arab Emirates ?. Orinasa mitady mpiara-miasa amin'ny zandriny amin'ny fitantanana hetsika sy ny tsenam-pianakaviana momba izany dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanombohana asa.
Noho izany, ny Araba Media Group (AMG) dia fikambanana malaza any Dubai. Ny porofo manintona indrindra ny vondrona Media Media any Emirà Arabo Mitambatra. Misy renivola iray mifototra amin'ny tsenam-bola izay manana vondron'olona ao Dubai Holding. Satria ny fialam-boly ny fananganana orinasa vaovao ao Emirates dia mendrika tokoa ny hiaraka. Amin'izao fotoana izao manana asa vitsivitsy vitsivitsy atolotra ao amin'ny tranokala izy ireo.
Amin'ny ankapobeny, ny AMG dia mampiroborobo ny asa any ivelany any Dubai. Amin'ny ankapobeny, ity orinasa voalohan'ny orinasam-panjakana ity dia nampiditra rafi-piasana iray tena tsara. Raha fintinina ny orinasa fialamboly dia tsara raha mitady asa marketing any Dubai ianao. Mazava ho azy fa afaka mahita fitantanana fotoana ao anatin'ny Global Village ianao. Tamin'ny famakafakana farany, ny Arab Media Group dia natsangana tamin'ny volana martsa 2005 ka manana fahatoniana mafy ao Dubai. Ny vondrona media arabo ao amin'ny United Arab Emirates dia manana ny mahagaga sy mpiasa be dia be ny manam-pahaizana momba ny marketing any Dubai.
Mpifanaraka amin'ny orinasa mpanara-maso akaiky indrindra. Hatramin'izao fotoana izao dia misy mpikambana ao amin'ny mpikambana ao amin'ny 320. Izy io dia nokarama tao amin'ny birao varotra telo tao Dubai. Asa momba ny governemanta ao Dubai - Fandefasana ny fivoahanao mankany amin'ny seranam-piaramanidina ao Dubai.
Jobs in Daman insurance and fields
Daman mandraka ankehitriny dia mikaroka hatrany ny matihanina matihanina mahay. Raha tsy misy ny fahatarana ny orinasa mitady kandida mpifaninana amin'ny fiantohana. Ao amin'ny foiben'ny sehatry ny fitsaboana, tokony hangataka toerana miaraka amin'ny orinasa fiantohana Daman ianao. Nandritra izay fotoana izay, raha manana traikefa tsara amin'ny CV mety ho olom-bidy sarobidy amin'ny sehatry ny raharaham-barotra amin'ny ankapobeny koa ianao.
Ny orinasa Daman dia manam-pahaizana manokana amin'ny fiantohana ara-pahasalamana. Afaka mampiasa azy ireo mora foana amin'ny alàlan'ny fampidinana a finday fampiharana. Tsy milaza na inona na inona amin'ny fifandraisana governemanta orinasa ao Abu Dhabi ka ity fikambanana ity dia orinasa azo antoka hiasa. Raha ny zava-misy dia ny fiantohana Daman dia nanomboka niasa tamin'ny May 2006. Ny tena porofo manery tena ilaina hiara-miasa aminy dia ny manana mpiasa 1100 ananany. Ianao dia afaka Google ho an'i Michael Bitzer the PDG an'i Daman na andramana mba hifandraisanao amin'ny orinasan'i Linkin.
Zava-dehibe iray hafa i Daman manolotra karazana fiantohana ara-pahasalamana toerana ao Dubai City sy Golfa. Noho izany antony izany, rehefa miasa miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka mahazo drafitra karama mahavariana miaraka amin'ny bonus fanampiny. Amin'ny lafiny tsara, ny orinasa dia tsy misy fetra sy fandrakofana ara-jeografika bebe kokoa mba tsy afaka hiasa any UAE ihany ianao.
Mpitarika ao amin'ny governemanta any Dubai - Atsaharo ny fivoahanao an'i Daman.
Jobs in Dubai Holding
Amin'ny ankapobeny, ny orinasa Dubai Holding dia orinasa manerantany amin'ny fampiasam-bola. ary iray amin'ny orinasa tsara indrindra any Moyen-Orient. Amin'izao fotoana izao ny orinasam-pifandraisana mampivoatra ny mpiasa vaovao tsirairay izay hiditra ao amin'ny ekipany. Mandraka ankehitriny, Dubai Holding dia manorina toeram-piompiana varotra manokana any UAE. Mazava ho azy fa ny orinasa mampivelatra fampiasam-bola mahavariana ary mitantana portfolio iray orinasa ambony malaza sy malaza any Moyen Orient ary mifantoka indrindra amin'ny sehatry ny fampiasam-bola.
Azo antoka fa rehefa ianao fikarohana asa Afaka mahazo tombontsoa amin'ny asa ara-bola ianao miaraka amin'izy ireo. Miaraka amin'ny tsenam-barotra sy trano fivarotana vahiny Dubai Holding manolotra ny iray amin'ireo fotoana mety tsara indrindra amin'ny asa. Etsy ankilany, kandidà amin'ny fifandraisan-davitra koa dia raisina ho fandraisana anjara Dubai Holding.
Ambonin'ny fitambarana rehetra ao Dubai dia napetraka tamin'ny 2004. Amin'ny ankapobeny, ny Holding dia mitantana ny firenena 12-14 ary mampiasa olona 25,000 ao Emirà Arabo Mitambatra. Ny Dubai Holding dia orinasa fampiasam-bola goavana mitantana ny 16.8 Billion AED. Hatramin'izao fotoana izao, ny portfolio-n'ny 130 arivo lavitr'ezaka tarihan'ny lehibeny. 6.3 Billon AED tsy mahasoa.
Mpitarika ao amin'ny governemanta any Dubai - Fandefasana ny resadresaka ho an'i Dubai Holding.
Tanànan'ny tranokala ao Dubai dia manohy manitatra tetikasa maromaro ao Emirà Arabo Mitambatra. Amin'ny ankapobeny, ny tanànan'i Dubai manohana ny fahombiazan'ny orinasa any amin'ny firenena GCC. Rehefa ela ny ela dia manintona ireo marika fampiasam-bola tsara indrindra ireo valan-javaboary tsara indrindra any Dubai. Ary raha ny tokony ho izy dia orinasa Fortune 500 ao anaty tanàna Dubai. Mandraka ankehitriny dia ny fitomboan'ny asa eo an-toerana ary mamorona ekipa mpitantana mety amin'ny Internet City izany no andrasana mitady.
Na dia mety ho marina aza ny tanànan'i Dubai. manana ny tontolo tsara indrindra ho an'ny fikambanana ary mpandraharaha any Dubai. Izany no ao an-tsaina, ny orinasa dia namorona ny onjan-drano lehibe manaraka ny fampiasam-bolan'ny Hotel. Ary amin'ity tranga ity dia hanao fanavaozana any Dubai sy Abu Dhabi mitombo manerana ny Moyen Orient indrindra eo amin'ny Expo 2020. Asa momba ny governemanta ao Dubai - Mampidira ny fampiharana any amin'ny City Internet ao Dubai.
Jobs in Dubai Knowledge Park
Zava-dehibe ny mahatsapa fa ny Dubai Knowledge Park dia toerana malaza eran-tany ho an'ny fandraharahana. Ny porofo manamafy indrindra ao amin'ny asa fikarohana. Izy ity ve no orinasa voalohany sy hany faritra tokana natokana ho an'ny orinasam-pifandraisana maha-olombelona ho an'ny orinasam-pifandraisan'ny Internet ao Dubai. Manondro mandray ny fifanarahana asa amin'ny orinasa miorina ao Dubai Internet City. Amin'ireny toe-javatra ireny, ny tsirairay avy amin'ireo mpitsoa-ponenana vaovao dia mianatra tsara ny Emirates.
Amin'ny ankapobeny, ny 2003 dia namatsy vola amin'ny orinasa TECOM Group. Araka ny hita etsy ambony, Dubai Knowledge Park dia manolotra fitantanana ny asa fananganana orinasa sy orinasa. Raha jerena ireo teboka ireo, dia azo atolotry ny orinasa ny fikambanana vaovao. Ho an'ny ampahany lehibe indrindra tambajotra fanohanana maharitra ao afovoan'i Dubai dia ivon'ny orinasa.
Dubai Knowledge Park no orinasa tsara indrindra amin'ireo orinasa ambony indrindra ao Emirates. Amin'ny lafiny iray, DKP dia mahasahana faritra 1 tapitrisa metatra toradroa efa vonona ampiasaina ho an'ny orinasa vaovao ary mazava ho azy fa hanomboka. Na dia mety ho marina aza izany 95,2 arivo metatra tora-droa amin'ny orinasa madio. Izany no antony, maro be ny orinasa UAE misy eo akaikin'ny Palm Jumeirah, Mall of the Emirates, Emirates Hills, ary Dubai Marina. Amin'izany tranga izany dia misy ny fomba tsara indrindra mba hampiakatra ny resadresaka momba ny fahafahana miasa vaovao ao Dubai. Asa momba ny governemanta ao Dubai - Mamelà ny CV ho any Dubai Knowledge Park.
Karohy ao Dubai Media City
Dubai Media City (DMC) amin'ny ankapobeny dia miteny io fikambanana mahatalanjona io. The Dubai Media City no nokaramaina 2000. Tao anatin'izany toe-javatra izany, ny DMC dia natomboka tamin'ny Emirates. Ny tena fahitana dia ny hampivelatra ny foibe Dubai Media. Mba hametrahana izany fomba hafa izany, ny orinasa mitady sehatra iraisam-pirenena. Mpitsoa-ponenana avy amin'ny vazimba manerana izao tontolo izao izay mitady asa any Dubai. Izany no mahatonga ny orinasa Dubai Media City ho tonga lafatra ho an'ny faritra Afovoany Atsinanana.
Ny zavatra voalohany tokony hotsarovana hatramin'ny nanokafana DMC orinasa. Media manontolo orinasa any Dubai nivoatra nanomboka tamin'ny 2000 ho toy ny vondrom-piaraha-miasa miroborobo. Androany ny asa Expo 2020 anio mahavariana miaraka amin'ny Dubai Media City. Amin'ny lafiny lafin-javatra tsara ohatra ohatra Music Sectors. Ankoatra izany, misy mpiandraikitra New Media. miara- miaraka amin'ny varotra sy fialamboly any Dubai. Ny asa amin'ny Broadcasting dia misy ihany koa amin'ny masoivohon'ny sarimihetsika sy ny fampahalalana. Raha ny tokony ho izy dia ny Dubai Media fandraisana mpiasa izao ho an'ny lehiben'ny serivisy marketing.
Na izany aza dia mety ho ny Career marina any Dubai Media City Business Centers. Ankoatra izany dia namorona ny maro koa ireo tetikasa azonao ifandraisana amin'ny findainao. Amin'ny alalan'izany famantarana izany, tokony hampiroborobo ny CV ianao. Satria ny mpiandraikitra tompon'ny HR dia hijery ny antsipirian'ny asa. Arak'izany, mety tsara koa ny fandrotsahana asa any amin'ny faritra raha tianao ny hanombohana ny orinasanao manokana. Tsy lazaina intsony ny ireo sehatra tsy manam-paharoa ao Dubai Media City izay mikendry ireo mpikatsaka asa vaovao.
Mpitarika ao amin'ny governemanta any Dubai miaraka amin'i Dubai Media City.
Asa miaraka amin'ny Dubai World
Amin'ny tranga fa ianao no olona tsy miasa. Ny orinasa mitazona an'izao tontolo izao, Dubai World dia ny fomba tsara indrindra ahazoana asa. Ny fametrahana azy dia izao tontolo izao iray hafa Dubai dia mifantoka amin'ireo kandida vaovao tsirairay. Zava-dehibe ny mahatsapa fa ny sehatra fitomboana stratejika any Dubai dia misy ny sehatry ny asa fitaterana Transport & Logistics. indrindra Afaka manomboka mora foana ianao amin'ny Drydocks & Maritime miaraka amin'ity orinasa ity. Ankoatr'izany, ny fikarohana asa tsara dia manolotra amin'ny tetik'asa fampandrosoana an-tanàn-dehibe tahaka ny injeniera.
Amin'ny lafiny ratsy ny fampiasam-bola amin'ny asa sy ny tolotra ara-bola, ny toerana mifandraika dia sarotra be. Satria ny Tafatafa Manerantany any Dubai dia tena henjana raha handao ny toeran'ny fitantanam-bola. Mitombo isanandro ny portfolio-n'i Dubai. Ny asa momba ny governemanta miaraka amin'ity orinasa ity dia ahitana ny sasany amin'ireo orinasam-pitaterana manerantany ao amin'ny orinasa izay ahafahanao mahazo tolotra asa. Ny porofo mampiaiky indrindra fa mendrika hanandramana i Dubai World dia portfolio matanjaka. Ny teny amin'ny ankapobeny, anisan'izany ny famerenana na ny fanondroana azy ireo amin'ny Linkedin, dia hendry fomba hahazoan'ny tolotra asa ho an'ny fandevenana Pakistaney.
Dubai World dia nahavita dingana goavambe hanamafisana ny World Group ao Dubai. Mandritra izany fotoana izany, ny asany fototra dia tsara ho an'ny mpihaza mpihaza. Ny orinasam-pandraharahana orinasa any Dubai dia mety hamela azy ireo handroso amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny orinasa eran-tany.
Asa momba ny governemanta ao Dubai - Fandefasana ny resadresaka ho any amin'ny World Dubai.
Manomboka amin'ny Dubai ny ho avy Airport Career. Jobs in Dubai Airport dia tena fomba tsara mitady vola any UAE. Mandraka ankehitriny izao ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Dubai dia manana fotoana ho anao. Azonao atao ny manomboka ny mpamilin'ny uber na mpanatanteraka varotra. Na mety ho atao fiofanana ianao mpitantana ary hasandratra amin'ny toerana ambony ny mpitantana. Amin'izao fotoana izao dia ny seranam-piaramanidina iraisampirenena voalohany manompo an'i Dubai City ny seranam-piaramanidina.
Na ho ela na ho aingana izay monina any Dubai lasa ianao mpampiasa mpampiasa avonavona amin'ny serivisy ao amin'ny United Arab Emirates. Ka ny hahazo asa miaraka amin'ny seranam-piaramanidina ao Dubai dia mety ho tanjonao ihany koa. Mandraka ankehitriny dia tokony hiezaka ny ho tonga kandidà ianao amin'ity seranam-piaramanidina mahaliana ity. Indraindray dia afaka miatrika ekipa mpanatanteraka malaza ianao amin'ny loge mpandeha iraisampirenena.
Ao amin'ny seranam-piaramanidina taloha Iraisam-pirenena Dubai World-Al Maktoum miandry anao. Fahagaga mahavariana fa seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Dubai. Ao amin'ny afovoan'ny Business Emirates no seranam-piaramanidina faharoa be mpitia indrindra any Azia. Mandraka ankehitriny izao ny seranam-piaramanidina Dubai manompo mpandeha (85,654,250) isan-taona.
Asa momba ny governemanta ao Dubai - Fandefasana ny fivoahanao mankany amin'ny seranam-piaramanidina ao Dubai.
Dubai Department Department
Ny sampan-draharaham-bara-tany ao Dubai no nahatonga ny firenena UAE ho firenena mety ho an'ny tanjona ara-barotra Ho an'ny firenena eo an-toerana sy Iraisam-pirenena indianina iraisam-pirenena. Mamorona entana sy fivelomana mendrika ho an'ny rehetra. Nisokatra ity fitokanana departemanta any Dubai ity varavarana ho an'ireo mpifindra monina iraisam-pirenena. Misy fananganana fanamboarana fitantanana ny tanin'i Dubai. Ity orinasa Emirate ity nahatratra ny ambaratonga fahombiazana amin'ny asa mbola tsy ela akory izay tany Dubai sy Abu Dhabi.
Tsy misy hatak'andro hotadiavina daholo ny mpihaza asa avy any India miaraka amin'ity orinasa ity Ireo mpitarika mpanatanteraka dia mitady asa mafy sy olona nanolo-tena avy any Afrika Atsimo. Iza no te hiditra amin'io orinasam-panjakana Miozolomana io ?. Hatramin'ny 2000 mpilalao karena vaovao tonga any Dubai. Ary izany dia mamela ny new Dubai Expats mba hahatratra ny haavon'ny asa any amin'ny Emirates.
Miaraka amin'ny departemantan'i Land Land Dubai dia afaka mahita ny toerana fampandrosoana ianao. Ary eo ambadika, afaka mandroso lavitra noho izay mihoatra anao ianao. Any aoriana dia ny fandrosoan'ny fampandrosoana ny tany eto amin'ny firenena. Hanao tena mamorona tolotra asa bebe kokoa.
Asa momba ny governemanta ao Dubai - Fandefasana ny fivoahanao ho an'ny asa governemanta.
Asa eo amin'ny Emirates Airline
Fantaro ireo fahafahana miaraka amin'ny Career Emirates Group. Amin'ireny toe-javatra ireny, ny vondrona Emirates dia manolotra karama tsara karama ny fahafaha-manao karatra ary ny resadresaka an-tongotra. Amin'ny ankapobeny, ny momba ny asa izay voamarika ny vondrona Emirates dia fananan'ny governemanta Dubai tanteraka. Raha ny tokony ho izy dia orinasa mpampanjono vola amin'ny Mitady mpiasa vaovao hatrany i Dubai.
Amin'ny lafiny iray, na mitady ny tanjon'ny fiarahana amin'ireo ekipan'ny mpanamory aza ianao. Amin'ny famakafakana farany ny fahazoana ny toeran'ny injeniera dia hetsika maranitra. Mandritra ny fotoana Emirates nasionaly mitady tolotra omena asa. Emirates Group Career natokana handray an-tànana sy hitarika lohateny lehibe ho an'ny teratany UAE. Na izany aza, Raha toa ianao ka mitady asa iraisam-pirenena Mandefa ny fangatahanao any Emiràny avy hatrany.
Amin'ny lafiny iray dia famatsiam-bola amin'ny ora izany. Ho an'ny tanànan'ny 150 mihoatra ny tanànan'ny 83 manerana ny kaontinanta enina. Azonao atao tsara ny mitadidy mahazo asa miaraka amin'ny Emirates. Ny hany mila ataonao dia ny fifandraisan'ny tompon'andraikitry ny HR tsotra ary manatona azy ireo.
Ho an'ny tanjona fampivoarana asa ho an'ny mpitady asa tsirairay. Ny Emirates dia manampy hatrany amin'ny fampivoarana orinasa amin'ny fomba tahaka ny famoronan'ny Governemanta Dubai. Mba hametrahana azy amin'ny fomba hafa, ny tontolon'ny Emirates Airline dia mandrisika hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa. Ny tsy fivadihana amin'i Dubai Royal Familly dia ilaina raha miara-miasa amin'izy ireo ianao. Miaraka amin'ny antsipirihany amin'ny antsipirihany sy ny fanoloran-tena amin'ny fampandrosoana no lalana ho an'ny asa miaraka amin'i Emirates. Tsy maintsy ho tsaroana fa ny fitomboan'ny fikambanana dia fomba haingana sy fahombiazana.
ENOC - Tolotra orinasam-pirenena momba ny solika ao amin'ny Emirates karazana asa maro any Dubai. Raha atao amin'ny teny hafa, raha mitady orinasa isan-karazany miaraka amina fananana matanjaka ianao. Emirates Oil no safidy tsara indrindra sy ny azy manana rafi-pananganana fandrosoana matanjaka. Ny fampandrosoana ny renivohitry ny olombelona miaraka amin'ny orinasa ENOC izay mampiakatra saina dia ny Emirà Arabo Mitambatra.
Amin'io tanjona io, ny orinasa Emirates National Oil Company dia fikambanana 21 taonjato manerantany amin'ny sehatra mitombo. Ny sekreterany Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Manoro hevitra manokana ary isaky ny mitsidika ny foibe any Dubai City.
Ny avonavona dia mirehareha amin'ny azy ireo tontolo iainana miasa. Mandritra ny prezidà mialoha dia mandray tsara ireo expats vaovao amin'ny ENOC. Ny orinasa dia mikendry ny ampaherezo ny famoronana eo amin'ny fitantanana ny olombelona. Manohitra ny fivoaran'ny asa hafa manerana ny orinasa dia mitaky fotoana. Etsy an-daniny, raha i Enoc dia manana fiofanana tsara fitantanana fahaiza-manao ao amin'ny afovoan'i Dubai.
Asa momba ny governemanta ao Dubai - Fandefasana ny resadresaka ho an'i ENOC.
Jobs in Emirates Post
Ao ambadiky ny Emirates Post dia iray amin'ireo mpandraharaha ofisialy ho an'ny Emira Arabo Mitambatra. Mandritra izany fotoana izany dia ao anatin'ny vondrona eken'ny Governemanta Emirates izany. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, tokony ho fantatrao fa amin'ny ankapobeny ny orinasa dia natsangana tamin'ny Aogositra 19, 1909. Mba hametrahana azy amin'ny fomba hafa, nanomboka ny fitantanana ny orinasa Indian Post Office ny orinasa mandra-pahatongan'ny fahaleovantenan'i India tamin'ny 1947. Ny orinasa dia manana tranonkala vavahadin-tserasera tokana ahafahanao misoratra anarana. Amin'ny lafiny tsara, afaka mahazo fanairana amin'ny asa avy amin'izy ireo ianao.
Mpikarakara ny governemanta ao Dubai - Fandefasana ny resadresaka ho an'ny vondrona Sendikan'ny Emirates.
Etihad Airways Mpitarika ao Abu Dhabi
Etihad Airways dia lohan'ny fitaterana ao Abu Dhabi. Ny orinasa tsara indrindra i Etihad Airways dia tokony hotsarovana. Io orinasa io no vondron'olona faharoa lehibe indrindra ao Emirà Arabo Mitambatra, izay vao avy eo Emirates Airline. Raha tianao izany Hanomboka asa vaovao koa any amin'ny hotely miaraka amin'izy ireo. Tokony ho tonga any amin'ny birao any Khalifa, Abu Dhabi, akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisana Abu Dhabi ianao. Fa ny fomba tsara indrindra dia ny fisoratana anarana amin'ny Internet na tadiavo ny tompon'andraikitra HR amin'ny Linkin ary mifandray aminy.
Tao anatin'izany toe-javatra izany dia nanomboka niasa i Etihad tamin'ny Novambra 2003. Nanomboka teo dia nitombo niaraka tamin'ny orinasa tsara indrindra tao Abu Dhabi izy ireo. Ny mamoaka ny zotram-piaramanidina dia iray amin'ireo orinasa tsara indrindra ary miasa mihoatra ny sidina 1,000 isan-kerinandro. Etihad Airways manampy amin'ny fandrakofana ny mpandeha 120 sy ny entana amin'ny Moyen Orient, Afrika, Eoropa, Azia, Aostralia ary ny kaontinanta amerikana.
Asa momba ny governemanta ao Dubai - Fandefasana ny resadresaka ho an'ny ETIHAD.
Orinasa lehibe iray amin'ny indostrian'ny Airline dia i Fly Dubai. Afaka misoratra anarana amin'ny fampandrenesana asa ianao miaraka amin'ny Fly Dubai company. Tsy milaza na inona na inona ny talentan'izy ireo ao amin'ny media sosialy. Raha te-hitombo haingana eo amin'ny ambaratonga asa ianao. Manandrama ampiharina amin'ny FlyDubai. ary ampio ny antsipiriany momba ny fampandrenesana asa any Dubai na dia amin'ny asa fiarovana aza. Mandritra izany fotoana izany dia ho fantatrao foana ny kolotsaina Dubai rehefa miditra ao amin'ny orinasa ianao. Ambonin'ny zava-drehetra, ny flydubai dia hanana fotoana mety tsara anao. Na inona na inona toerana tadiavinao. Mety hanampy anao ity tranonkala ity. Famerenana ny orinasan'ny HR, Marketing, ary ny mpiara-miasa.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina ny fanavaozana sy ny asa famoronana ao Abu Dhabi sy Dubai. Ny fitantanana ny Jobs amin'ny FlyDubai manosika ny raharaham-barotra. Amin'ny alalan'izany famantarana izany, dia fantatry ny orinasa izany mpiasa an-tanindrazana any India no mpiasa tsara. Ary i Eoropa no tena manan-danja indrindra amin'ny fananganana asa momba ny asa. Na dia mety ho marina aza ny hahatanteraka ny tanjona feno ao anatin'ny orinasa dia fanalahidy iray.
Asa momba ny governemanta ao Dubai - Fandefasana ny fivoahanao mankany FlyDubai
Efa nanavao ny tranonkalany ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Dubai, dia afaka mijery ny tranonkala havaozina izy ireo. Ao no ahitanao torolàlana mahaliana amin'ny fanofana fiara ary famandrihana hotely eny amin'ny seranam-piaramanidina.
Ny fahafahana miasa amin'ny KIZAD
Fomba vaovao amin'ny KIZAD. Misy tetikasa vitsivitsy izay natombok'ilay orinasa. Ny orinasa dia mitazona sy mivoatra ao an-toerana ary talenta iraisam-pirenena amin'ny traikefa amin'ny Automotive. Raha ny zava-misy, ny KIZAD dia hamorona tetikasa vaovao ao Abu Dhabi. Hanorina toekarena maharitra. Na dia mety ho marina aza izany amin'ny fotoana maharitra. Ny fahitana ny orinasan'i KIZAD dia hamorona sy hampivelatra ny raharaham-barotra manerantany any Abu Dhabi.
Kizad manolotra tombontsoa tena tsara. Indrindra ho an'ny franôter vaovao. Ao an-tsaina. Tokony hisaina azy ireo ianao. Mpitantana fitondrana ao Dubai. Ampio ny resadresaka ho an'i KIZAD.
Jobs ao amin'ny World DP ao Emirà Arabo Mitambatra
Miaraka amin'ireo orinasa Governemanta hafa. Ny DP World dia mpandrindra lalao mpitarika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ankoatr'izany, ny orinasa dia ampahany manan-danja amin'ny sehatry ny famatsiana ho an'ny orinasam-pandraharahana ataon'ny governemanta. Mba hametrahana izany fomba hafa izany dia avelao hijanona fotsiny izany. Asa iray mahatalanjona amin'ny tontolo DP dia mahafinaritra. Zava-dehibe iray hafa amin'ity orinasa ity dia Fomba haingana hahita asa. Ary eo amin'ny orinasa tsara tantana dia maka antoka foana ao amin'ny orinasa. Ny mpiasa dia mitazona ny mpiasa vaovao hatrany amin'ny ambaratonga ambony.
Zava-dehibe iray ho an'ireo olona mitady asa any amin'ny World Cup. Manana ny zavatra ilainy ny olona mba hampandrosoana azy ao anatin'ny orinasa. Miaraka amin'izany ao an-tsaina tahaka ny mpiasa Philipino vaovao, dia mitantana ianao. Ny anjara toerany lehibe ao amin'ny roalahy manerantany ao UAE. Zava-dehibe ny mahatsapa ny DP World manampy ny mpiasa manokana ho an'ny mitombo ny toe-karena eo amin'ny toeram-pirenena.
Amin'ireny toe-javatra ireny, zava-dehibe ny manandrana mikatsaka asa miaraka amin'izy ireo. Noho izany antony izany dia mitaky fitantanana malefaka ity orinasa ity. Etsy ankilany kosa dia mirehareha sy be fanebahana fikambanana miasa manerana ny Emirà Arabo Mitambatra. Amin'ny lafiny iray, tsy matahotra ny olona ny olona Miangavy ny mpandraharaha any Dubai. Ankoatra izany, ampidiro ny Resume etsy ambany.
Alefaso ny famerenana ho amin'ny asa momba ny governemanta ao Dubai!
Te-hahita a Job in Dubai? Na dia mety ho marina aza isika dia afaka manampy anao. Etsy andaniny, tokony hijery ny orinasa hirotsaka an-tsitrapo manokana koa ianao. Satria misy asa be dia be ao amin'io sehatra io. Eto isika dia manana Top job finday any Dubai ary Tranonkala iraisam-pirenena. Tena sarobidy tokoa ny mihatra amin'ny CV anao. Ary ny fandefasana fampiharana fotsiny. Hila latsaky ny roa minitra. Ary tsy mahafantatra na oviana na oviana, rehefa misy asa vaovao tonga any amin'ny Golfa.
Miaraka amin'ny orinasa Dubai City ianao dia afaka manomboka asa vaovao ao The Emira Arabo Mitambatra!.